Iwu ọrụ maka nnyefe ike na ọdịda nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ dị elu
KYN28A-12 ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ “mgbochi ise” chọrọ ka arụ ọrụ mechie; 1. Gbochie njehie nke onye nbipute sekit - aka mgbaji sekit ga -anọrịrị n'ọkwa ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ nnwale, enwere ike mechie sekit, ọrụ mepere emepe. 2. Gbochie mkpagharị sekit na -akpụ akpụ ...
Ụlọ ọrụ ọkụ, dị ka ebe a na -emepụta ọkụ eletrik, na -enwekarị ọkụ eletrik. Maka ụlọ ọrụ anyị, a na -ekewa moto n'ime ụlọ ọrụ n'ime moto 6KV na moto 400V. High voltaji switchgear na ọtụtụ -eji ike distributi ...
Isi ọdụ ụgbọ ala na -ejikọ mkpuchi mmiri, njikwa nrụgide, mkpuchi na mkpuchi, yana nwee ezigbo ọkụ eletriki na igwe, enwere ike iji ya ogologo oge n'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike. Yabụ kedu ọrụ nke ọdụ ụgbọ USB? Ka m gosi gị ya ...
Atụmatụ owuwu maka obodo mara mma na ịntanetị nke ihe emeela ka ihe mmetụta pụta n'ihu. Ma na China ma ọ bụ ụwa niile, iwulite obodo nwere ọgụgụ isi aghọọla omume a na -apụghị ịgbagha agbagha. Na gburugburu izugbe a, ihe mmetụta dị ka "akwa" nke obodo mara mma ga -agharịrị ...
Nka imewe ise na ihe ngosi nka nke ihe mmetụta
Onu ogugu ihe mmetụta na -abawanye na elu ụwa na na oghere gbara anyị gburugburu, na -enye ụwa data. ...
Nnyocha mmejọ na usoro nke switchgear
Kedu ihe bụ switchgear? Switchgear nwere otu ma ọ bụ karịa obere ọkụ ọkụ na njikwa metụtara ya, nha, akara, nchedo, ụkpụrụ na akụrụngwa ndị ọzọ, yana onye nrụpụta na-ahụ maka njikọ eletriki na njikọ njikọ dị n'ime, ọgbakọ zuru oke nke ihe nhazi ...
Nchịkọta nke Ihe Ọmụma Ntanetị nke Ndị na-eme mgbanwe ụdị akọrọ
A na-eji ụdị ngbanwe ụdị nkụ na ọkụ mpaghara, ụlọ elu, ọdụ ụgbọ elu, akụrụngwa igwe CNC na ebe ndị ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ụdị mgbanwe ụdị akọrọ na-ezo aka na ntụgharị ọkụ nke na-emikpu cores na windings ya na mmanụ mkpuchi. A na -ekewa ụzọ jụrụ oyi n'ime eke ...
Nlekọta anya maka iji eriri ọkụ ọkụ ọkụ dị elu
N'ihi na switchgear dị ndụ, ọ dị oke egwu. Ọ bụrụ na ịgaghị ntị mgbe ị na -eji ya, ọ ga -eme ka igwe ahụ ghara ịrụ ọrụ nke ọma, ọ ga -ebutekwa ọkụ eletrik, nke ga -emetụta ndụ gị. Ya mere, mgbe ị na-eji igwe ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ịkwesịrị ị attentiona ntị pụrụ iche t ...
Otu esi etinye ma rụọ ọrụ nkwụsị fuse Cutout
Usoro ọrụ 1/6 Ịwụnye fuuz na-adapụsị kwesịrị ime ihe ndị a chọrọ tupu nrụnye, lelee iji gosi oghere dị n'etiti tube gbazee na nkwado mkpuchi. Ogo nha dabara na ihe ntuziaka ntuziaka ahụ iji hụ na kọntaktị zuru ezu zuru ezu ...
Ọrụ nke Dropout Fuse Cutout
Nkwadebe nchekwa: Mgbe ị na -ewepụta fuuị ụdị dobe, onye na -arụ ọrụ ga -eji mkpanaka mkpuchi nwere ọkwa volta kwesịrị ekwesị wee gafee ule ahụ, yi akpụkpọ ụkwụ mkpuchi, mkpuchi mkpuchi, okpu mkpuchi na enyo, ma ọ bụ guzoro n'elu ikpo nkụ nkụ, wee lezie ya anya. iji chedo nchedo onwe onye ....
Kedu ihe dị iche n'etiti onye na -emebi okirikiri voltaji na ịgbanye ọkụ?
Nnukwu sekit sekit (ma ọ bụ mgbanyụ ọkụ dị elu) bụ akụrụngwa njikwa ike nke ọdụ ụgbọ mmiri, yana njiri emenyụ arc, mgbe arụ ọrụ sistemụ, ọ nwere ike bepụ yana site na ahịrị na ngwa eletriki dị iche iche na -enweghị ibu na ibu. ugbu a; Mgbe f ...
Ọdịiche dị n'etiti kabinet mgbanwụ, kabinet na -enweghị ike ịgba na kabinet siri ike
Kabinet netwọk mgbanaka: nke a makwaara dị ka HXGN-12, ụdị XGN15-12 ụdị ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ dị elu.Oge mbụ na-ezo aka na kabinet mgba ọkụ ejiri na netwọ nkesa nkesa mgbanaka, n'ihi usoro ya dị mfe, mgbanye ibu a na-ejikarị na ngwakọta fuse, mgbanaka mgbanaka mgba ọkụ dị otú ahụ. kabinet netwọk. 1, mgbanaka ahụ ...